Isingeniso kuLaozi - uMsunguli weTaoism
ULaozi ( uphinde wachaza iLool Tzu ) wayengumfilosofi waseTshayina kunye nombongi onokucingwa ukuba ngumsekeli weTaoism (kunye no-Daoism). Ukuguqulelwa kwesiNgesi kwegama lesiTshayina elithi "Laozi" lithi "inkosi endala." ULaozi uyaziwa nangokuthi "ungumntwana wasendulo" - inkcazo, mhlawumbi, kwimo engumntwana ofana nalesi sibalo. Ngobulumko bakhe obunzulu beza kuhlambalaza kunye nokudlala - iimpawu ezifumaneka rhoqo phakathi kwee-Taoist masters.
Into encinci iyaziwa ngokuphila kwimbali kaLaozi. Into esiyaziyo kukuba igama lakhe lokuzalwa nguLi Erh, kwaye wayezalwa kwisizwe sase-Chu. Njengomntu omdala, wayenobumba obuncinane bekarhulumente njengomthala-nthala kwiincwadi zokugcina iingingqi. Ngesinye isikhathi, wayishiya le ndawo - mhlawumbi ukubandakanya ngokucace ngakumbi ngendlela yakhe yokomoya.
Njengomlenze, uLaozi uvuseleleke ngokomoya kwaye wahamba waya emngceleni osentshonalanga, apho walala khona ngonaphakade, waya ezweni lama- Immortals . Umntu wokugqibela adibana naye wayengumgcini-masango, ogama linguWen-Tzu, ocele ukuba uLoozi anikeze kuye (kunye nobuntu bonke) ubunzulu bokubaluleka kwakhe.
Ekuphenduleni kwesi sicelo, uLaozi wachaza oko kwakuza kwaziwa ngokuba nguDaode Jing (kwakhona uphawula iTao Te Ching). Ngaphandle kweZhuangzi (Chuang Tzu) kunye neLiehzi (Lieh Tzu), igama elingu-5 000 elithi Daode Jing lenza i-core core ye- Daojia, okanye i-Taoism yefilosofi .
* UTao: Iindlela ezingenasiphelo
* Iintengo ezintathu
* Abathunywa abathandathu
Ukucamngca Ngoku - Isikhokelo soQalelo sika- Elizabeth Reninger (isikhokelo sakho saseTaoism). Le ncwadi inika izikhokelo ezinyathelo-nenyathelo kwiinkqubo ezininzi zeTaoist Inner Alchemy (umz. Inner Smile, Ukuzindla Ukuhamba, Ukuhlakulela Ubunono BamaNgqina & Ikhandlela / Ukutshatyalaliswa Kwembali) kunye nomyalelo oqhelekileyo wokucamngca.
Ubuncedo obuhle kakhulu, ozisa iindlela zokulinganisa iYin-Qi kunye neYang-Qi kunye nokuvumelanisa iIl Ele Elements; ngelixa ehambisa inkxaso "yendlela yokubuyisela" ukuphumla ngokwemvelo ngokulungelelanisa kunye neTao enkulu kunye ne-luminous (okt yethu iYiyo yoMntu njengobomi obungapheliyo). Kunconywa kakhulu.
Amanqaku amancinci amancinci kubaQaleli
Ubunzulu bokusebenza obuphezulu (MOD) kunye neScuba Diving